Ụlọ Nzukọ si iwu si YouTube | Apg29
Ụlọ Nzukọ si iwu si YouTube
Pastọ ụzọ Stefan na Mary Hallman e iwu si YouTube.
Mary Hallman si mbụ ndụ na agbasa ozi n'ikuku tinyere YouTube.
Onye ama ama nke ndi ozuzu aturu Stefan na Mary Hallman si YouTube ọwa e mechie site YouTube ruru "ugboro ugboro ma ọ bụ oké imebi nke YouTube si iwu machibidoro akpọ asị okwu."
"Mpụ megide ha iwu"
Pastọ ụzọ Stefan na Mary Hallman zitere ndụ si ya studio na Myresjöfönster ma on Facebook na YouTube. Ma ugbu a, ha YouTube ọwa e wepụrụ si Google-ekesịpde ụlọ ọrụ na ahịhịa na ha mere "ugboro ugboro ma ọ bụ oké imebi nke ha iwu machibidoro na-akpọ asị okwu" .
Pastor The di na nwunye na-ekwere na nke a bụ ụgha n'ihi na ha hụrụ ihe niile ndị mmadụ, ha na-ekwusa ozioma na-eweta na niile mmemme ekiri ohere ịnabata Jesus.
The email site na YouTube
Mail na ọ bụrụ na shutdown ka Youtube zigara Ụlọ Nzukọ si.
Na email na Stefan Hallman nwetara ya na-ekwu na o "nwere ike ghara imeghe, nwere ma ọ bụ na-eke ihe ọ bụla ọzọ YouTube akaụntụ" . Suspension ga-otú ruo mgbe ebighị ebi na n'ụwa nile. Ịgbalị gaa ha ọwa zutere a ederede:
Ịgbalị ele a video na-anọgide agbakwunyere na web, ya anya dị ka nke a:
Stefan Hallman kwuru on Facebook :
"Anyị na-eju na nnọọ mwute na anyị YouTube ọwa na 461 debanyere aha na-emechi ruo mgbe ebighị ebi."
ike iji iwu
The ọwa ga-iwu si YouTube, anyị na-agụ na ihe ọ nụrụ ọtụtụ ugboro ebe ha sikwuo ha atumatu . A ga-enwe ma Christian ma na-abụghị Christian. Nso nso m na-agụ na ọzọ Christian ọwa e emechi. A ọwa na m meghachi omume megide na-ekwenyeghị ihe niile.
M na-nụrụ na 200 Muslim ọwa e mechiri. Ha na-agba ọsọ Isis nduhie na ndị ọzọ.
M na-nụrụ na Youtube ga-aghọ ọbụna ndị ọzọ tiri otú anyị nwere ike na-atụ anya ihe closures. Ebe a ma Ndị Kraịst na-abụghị ndị Kraịst na-ata ahụhụ.
Onwe ya, m kpebiri na m ga-ịde blọgụ na ojiji nke mmadụ mgbasa ozi dị ka ogologo dị ka o kwere mee ka ozi nke Jesus Christ. Nke a àgwà m site ná mmalite dị ka m mere na m website ka a blog na saịtị na 2007.
M kpebiri na m ga-arapara n'ahụ Jesus mere na ndị mmadụ ga-esi ohere-anata Ya na-azọpụta. Ekwela na-etinye aka na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nke nwere ike ma aghọta na n'ihe ize ndụ nwere ike agaghịkwa iru ozi nke Jesus.